IBendi valve valve booth NO. 3P43, eShanghai Automechanika ngexesha le-03 / 12-06 / 12/2019
Ivelufa yeBendi ithathe inxaxheba kwi-Automechanika Shanghai 2019 igama lomboniso: Automechanika Shanghai 2019; Idilesi: Umboniso weSizwe kunye neZiko leNgqungquthela (eShanghai) (NECC); Umhla: Disemba 03-06, ...
IBendi valve valve booth NO. 3P43, eShanghai Automechanika ngexesha le-28 / 11-01 / 12/2018
Igama Exhibition: Shanghai Frankfurt Auto Izahlulo Exhibition 2018 Idilesi: Shanghai National Convention kunye Exhibition Centre Umhla: Novemba 28 - Disemba 01, 2018 Igama Exhibitor: Taizhou ben ...
IBendi valve valve booth NO. 3P43, eShanghai Automechanika nge-29 / 11-02 / 12/2017
Ivelufa yeBendi ithathe inxaxheba kwi-Automechanika Shanghai 2017 Igama lomboniso: Automechanika Shanghai 2017; Idilesi: Umboniso weSizwe kunye neZiko leNgqungquthela (eShanghai) (NECC) Umhla: Novemba 29-Dece ...
IBendi valve valve booth NO. 3C44, kwi-Auto Aftermarket eGuangzhou ngexesha le-04 / 9-06 / 9/2017
Igama lomboniso: Amalungu e-2017 e-Guangzhou e-Auto Auto kunye ne-aftermarket Indawo yeMiboniso: i-Guangzhou Poly World Trade Expo (iHolo 1-6) Ixesha: ngo-Septemba 4-06, ngo-2017 Igama lombonisi: Taizhou bendi Val ...
IBendi valve valve booth NO. 3H62, eShanghai Automechanika ngexesha le-02 / 12-05 / 12/2015
Igama Exhibition: 2015 Shanghai Frankfurt Auto Izahlulo Idilesi Exhibition: Shanghai National Convention kunye Exhibition Centre Umhla: Disemba 2-Disemba 05, 2015 Igama Exhibitor: Taizhou ben ...
Isidlulwa seNjini yeValvu yeNjini
Uninzi lwezivalo zenjini zenziwe njengevalvu zesitayile sepoppet ngenxa yokunyuka kwazo naphantsi kokunyakaza kwaye zibonisa inhloko yevalvu yentloko ehambelana nesihlalo sevalve sokucofa ...
Konke malunga neeValves zeNjini
Ivaluva zenjini. Ityala lemifanekiso: Maksim Vivtsaruk / Shutterstock.com Iivelufa zeenjini ziyinxalenye yoomatshini esetyenziswa kwiinjini zomlilo zangaphakathi ukuvumela okanye ukuthintela ukuhamba kolwelo okanye irhasi ukuya nokubuya ...
Ukucaciswa kweValve yeNjini
Iivelufa zenjini ezichaziweyo ziiparameter ezichazwe ngezantsi. Qaphela ukuba le datha yenzelwe iinjongo zolwazi kwaye wazi ukuba umahluko kwiiparameter ezisetyenziselwa ukukhankanya i-eng ...
Iintlobo zeeValvu zeeNjini
Ngaphandle kokubonakaliswa kwezivalo zenjini ngokusebenza (ukutya ngokuchasene nokuphelisa), kukho iindidi ezithile zevalvu zenjini ezikhoyo ngokusekwe kuyilo nakwizixhobo. Iindidi eziphambili ze ...
Izinto zeValve yeeNjini
Iipavini zenjini zezinye zezinto ezikwiinjini zomlilo zangaphakathi ezixinzeleleke kakhulu. Isidingo sokusebenza kwe-injini ethembekileyo sinyanzelisa ukuba iivevini zenjini zikwazi ukubonisa i-resistan ...
Ukuhamba kweValve yeNjini
ngomphathi ku 20-10-07
Ukuhamba kwevalve zenjini kuqhutywa yi-camshaft ye-injini, equlathe uthotho lwe-lobes okanye i-cams ezisebenzela ukwenza intshukumo yomgama wevalvu ukusuka kukujikeleza kwecamshaft. ...
I-stoke ezine okanye ii-injini zangaphakathi zomlilo ezijikelezayo ezine zisebenzisa iindidi ezimbini eziphambili zevalvu - ivelufa yokutya kunye nevalve yokukhupha. Ivaluva zokungenisa ziyavulwa ukuvumela ukuhamba komoya / ipetroli / mixt ...